Pfungwa shanu dzekudzokera kune investments mushure mezororo | Ehupfumi Zvemari
Mushure mekudzoka kubva kumazuva mashoma ekuzorora ezororo, inguva yekutangazve maitiro ezuva nezuva. Uye zvingave zvishoma sei, rimwe remabasa aya rinosanganisira kugadzira nzira yekudyara iyo inokutendera iwe monetize mari kubva zvino zvichienda mberi. Pakutanga, kutarisana nekota yekupedzisira iyo yasara kusvika pakupera kwegore uye kune rimwe divi, kuronga kuti hukama nenyika yemari huchave sei mukati megore rinotevera remari. Ndiwo mazuva ano kwaunofanirwa kusarudza kwekuchengeta mari yako.
Ehezve, kudzoka kubva kuzororo hakuzove kuri nyore kwazvo kuti iwe ushandise dzimwe pfungwa dzekudyara mukushandisa. Kwete pasina, iyo kusagadzikana kwezvematongerwo enyika chichava chimwe chezvinhu zvikuru zvinozivikanwa zvinotsanangura misika yezvemari mukondinendi yakare. Zvakare, hazvigone kukanganwika kuti kukwira kwemitero muzvikamu zveeuro kuri padyo chaizvo uyezve kuti chinhu ichi chichagadzirisa shanduko yemusika wemasheya mumwedzi iri kuuya.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kufunga nezvacho kubva panguva ino zvichienda mberi ndechekuti iyo anodzoka yakapihwa nemisika yemasheya mumakore apfuura. Ndekupi kunofanira kukunda kuchengeteka pamusoro pezvimwe zvekufunga nezvehunyanzvi uye kunyangwe kubva pane yakakosha maonero. Nekuti zvazviri, ikozvino paunodzoka kubva kuzororo, uchafanirwa kutarisa kune mari kubva kune dzimwe, nzira dzakasiyana kwazvo. Chimwe chinhu chauchazofanira kuzvibvunza kubva kune chaiwo nguva.
1 Kudzoka kubva kuzororo: kupi kwekudyara?
2 Misika yemasheya: kusarudza matura anodzivirira
3 Sanganisa mari yemari
4 Tora mukana weye rebound rebound
5 Ari kubuda misika yemasheya: kuwedzera kuonga
6 Chengetedzo mukutora zvinzvimbo
Kudzoka kubva kuzororo: kupi kwekudyara?
Yako yekutanga nzira ikozvino ichave yekusarudza kuti ndeipi mari yemari kwaungaisa capital yako. Iyi midziyo inogona kunge yakasiyana neiya yakasarudzwa kusvika pari zvino. Iwe unenge usina kana sarudzo kunze kwekuchinja mari yekudyara kuti uvandudze zvidzoreso zvaunogona kuwana nemaitiro matsva. Hazvishamisi kuti hazvigone kutarisirwa kunze kuti isu tiri padyo ne a kuitika shanduko mumisika yemari, kuenda kubva bullish kune bearish. Sezvinoonekwa mumasvondo achangopfuura uko main indices epasi rose ari kuratidza kumwe kuneta munzvimbo dzawo.
Kubva pane ino mamiriro, haizove iri pfungwa yakaipa kuti iwe udzivirire chikamu cheguta rako mune fixed fixed term. Kutora mukana wekukwira kwemitero yezvibereko izvo zvigadzirwa zvebhangi zvave nazvo parizvino. Iko kwatova kugona kuita kudarika mwero we1% uye netarisiro zvirinani semhedzisiro yekukwira kwenzvimbo kunogona kuitika muEurope senge gore rinouya. Kwenguva yekutanga mumakore mazhinji, mari yemari iri zvakare inokwezva kune vashoma nepakati masaver. Chinhu chakange chisina kuitika kweakawanda, akawandisa makore.
Misika yemasheya: kusarudza matura anodzivirira
Mukati memakambani, imwe nzira yakanakisa ichaitwa nekuchengetedzeka pamusika wemasheya. Iri zano rinokutendera iwe kudzivirirwa kwakakura mune zvakanyanya kupokana zviitiko zvemisika yemari. Mupfungwa iyi, sarudzo inogona kuuya kubva kumatunhu akakosha seiyo magetsi kana simba. Nekuti mukuita, ivo vanoita zvirinani mune mashoma mashoma mamiriro ezvemisika yepasi rese yemisika. Kunyangwe hazvo ivo vasingave ivo vanopa iyo yakanakira purofiti munguva dzakakura dzemisika yemari. Uye zvakare, mazhinji emakambani akanyorwa ane mibairo inokwezva yemadividhi. Muzviitiko zvakawanda, yakadzika micheto pamusoro pe5%.
Kune rimwe divi, kuchengetedzeka kuchengetedzeka mumusika wemasheya ndiyo nzira yakakodzera kunongedza mari kune yepakati nepakati yakareba. Hazvina kumbobvira mune zvipfupi sezvo iwo akakosha ayo anonyanya kuzivikanwa nekuti akatsiga kwazvo mumutengo wawo. Pamusoro peaya akagadzirwa mune mamwe matunhu akakosha kwazvo uye ayo ane hukuru uye kudiwa mukushandurwa kwemazita avo panguva dzinenge dzese dzekutengesa zvikamu. Izvo zvakanaka kwazvo kuti yako portfolio yekudyara iri nerudzi urwu rwechengetedzo paunodzoka kubva kuzororo rako kukupa chengetedzo huru munzvimbo dzako pamusika wemasheya. Angave enyika kana kunze kwemiganhu yedu.
Sanganisa mari yemari
Hapana mubvunzo kuti zano rekudyara iri rinofanira kuve rekutanga kubva munaGunyana. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti et ichabatsira kusiyanisa mari iyo yauchazoisa mari kubva zvino zvichienda mberi. Chimwe chezvigadzirwa zvemari uko maitiro aya anonyanya kugadzirisa ndeyekudyara mari. Nekuti iwe unogona kunyange kusanganisa yakatarwa mari nemari inoshanduka kubva kumakona akasiyana kana maprimiyamu maererano nehupfumi hwemari iwe yaunoda kuti iyo yakavhenganiswa mari yekudyara ive yakavakirwa pairi. Uye zvakare, iwe haugone kukanganwa kuti ichi chiri pachena kumusoro chigadzirwa chemari. Ndokunge, nekufungidzira kukuru kune chikamu cheavo vadiki nepakati varimi.
Mune imwe nhanho mukati mezvinzvimbo zvekudyara, zvakakosha kuti mari yekudyara iri inodzivirirwa mumari. Hazvishamisi kuti ichave imwe yemakiyi akakosha ekuvandudza iwo mazinga epundutso eizvi zvigadzirwa zvemari. Ese uchiisa zvigaro zvako paeuro kana dhora reUS, zvichienderana nekuti vari kutengesa sei nguva dzese. Chikamu chakanaka chemakambani manejimendi chiri kusarudza aya mamodheru ekudyara senzira yekuita kuti kuchengetedza kubatsire pamwe nezvivimbiso zvakakura zvebudiriro kupfuura zvino.
Tora mukana weye rebound rebound
Seimwe sarudzo imwe panguva ino haufanire kukanganwa nezvegoridhe dema. Kusvika padanho rekuti inogona kuve imwe yemabhizimusi ane mari kwazvo kune anotevera makore. Iko kufungidzira kwevakuru kunoratidza kuti mutengo wemafuta unogona kusvika pamatanho e $ 90 dhiramu. Nekudaro, iyi nhumbi yezvemari inogona kuve nekwaniso yekuwongorora zvakare anopfuura gumi%. Yakakwirira kupfuura iyo inopihwa nezvimwe zvirevo zvaunazvo muinvestment world. Kubva pane iyi nzira, kune akawanda akawanda maeuros aunogona kuwana, kunyangwe uchifungidzira njodzi dzakawanda kupfuura mune dzimwe nzira dzekudyara.
Kuisa mari mugoridhe dema, imwe yesarudzo dzakasarudzika dzauinadzo kutenga zvikamu zvekuchengetedzwa kwemafuta zvakanyorwa pane akakosha indices emusika wemasheya pasi rose. Kana zviri zveSpanish equities, zvinongogumira pazvinzvimbo zvainogara Repsol uye kuti yanga iri imwe yemasheya anobatsira kwazvo muhafu yepiri yegore rapfuura. Zvisinei, une mikana yakawanda mumisika yemasheya eUnited States, England uye kunyangwe muHolland diki. Iwe unogona zvakare kuenda kune ino yehupfumi yemari kubva kune yekudyara mari ayo akavakirwa pamakambani eaya maficha.
Ari kubuda misika yemasheya: kuwedzera kuonga
Chimwe chezvisarudzo zvinokurudzira pamberi pako ndizvo zvinouya kubva kumisika yemari iri kubuda. Asi kwete chero munhu, nekuti njodzi dzinounzwa nemisika iyi dzinopfuura kushamisa. Kwamunogona kusiya maeuro mazhinji munzira, sezvakaitika mumakore apfuura. Ndosaka kusarudzwa kwemisika yemasheya iyi ichifanirwa kusarudzwa pasi pekuchengetedzeka kukuru kuitira kuti murege kuva nezvimwe zvinoshamisa kubva ikozvino. Kubva nemaonero aya, iwo mabhegi e China uye kune yakaderera Russia avo vanopa akanakisa bhizinesi mikana panguva ino.
Iyi misika yezvemari ndiyo inowana purofiti yakanakisa uye mune chero mamiriro ezvinhu pamusoro pechinyakare kuchinjana kana izvo zvinonyanya kuzivikanwa nevatengesi vevatengesi. Hazvishamisi kuti ivo vanopa iyo upside zvinogona inonakidza kwazvo, kunyangwe kana yavo yekushanduka ichifarira hapana mubvunzo kuti vanogona kuputsa zvese zvinotarisirwa zvekukura. Nemahara izvo zvinogona kuve zvinokwezva uye izvo zvisingawanikwe kumisika yese uye zvigadzirwa zvemari. Kusvika padanho rekuva imwe yedzimwe nzira kune iyo mari iwe yauinayo.
Chengetedzo mukutora zvinzvimbo
Nekudaro, uye uri riskier investment, haufanire kuisa chikamu chakakosha kwazvo chako chiripo capital. Kana zvisiri izvo zvinopesana, chero chikamu chidiki zvichave zvakanyanya kupfuura zvakakwana kuzadzisa zvaunotarisira zvekudyara. Nenzira iyi, unenge uchipa dziviriro huru kumipiro yako yezvemari kuitira kuti nzvimbo idzi dzisazoshanduka nenzira yaunoda. Hazvishamise kuti kunyanyisa kusagadzikana ndechimwe chezvinhu zvakajairika mumisika yemari yakasarudzika, nekuchinja-chinja muchikamu chimwe chete chekutengeserana chinosvika pamazana mashanu muzana uye zvakatonyanya.
Kune rimwe divi, iwo misika yakabatana zvakanyanya kune zvimwe zviwanikwa zvemari, zvakaita semafuta. Uye izvo zvinoenderana nekuti iri kuwedzera here, hakuzove nematambudziko akawandisa kusvika kumatunhu akakwirira mukuenderana nemitengo yayo. Kubva panguva ino yekutarisa, mitengo yavo haina kugadzikana uye zvichanyanya kunetsa kuona panoshanduka mafambiro, mune imwe nzira kana imwe. Beyond mamwe marudzi ehunyanzvi kufunga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Pfungwa shanu dzekudzoka kune mari mushure mekuenda kuzororo
Chii chinonzi IPREM?